सल्यानमा पनि डेंगु - Pradesh Today सल्यानमा पनि डेंगु - Pradesh Today
असोज ०१, २०७६ प्रदेश टुडे
सल्यान, १ असोज । सल्यानमा पनि डेंगुको संक्रमण देखिएको छ । जिल्लाको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका वडा नं. ६ काराकोटकी २२ वर्षिया एक महिलामा डेंगुको संक्रमण देखिएको हो । देशभर बढ्दो अवस्थामा रहेको डेंगु सोमबार सल्यानमा पनि देखापरेको छ ।
उच्च जोखिममा सल्यान जिल्ला डेंगुको जोखिममा रहेको छ । छिमेकी जिल्लाहरु दाङ, सुर्खेत, बाँकेमा डेंगुका बिरामीहरु भेटिएसँगै यसको प्रकोप जिल्लामा पनि फैलिन सक्ने भएकाले सल्यान जिल्लामा पनि जोखिममा परेको हो ।
जिल्लाको श्रीनगर, कालीमाटीसँगै शारदा नदी करिडोरको बस्ती र भेरी नदी किनारमा रहेको सल्लीबजार जोखिमयुक्त क्षेत्रको रुपमा रहेका छन् ।
यसबाहेक पूरै जिल्लामा नै डेंगुको जोखिम देखिएकोले उच्च सर्तकता अपनाउन थालिएको जिल्ला अस्पताल सल्यानले जनाएको छ । जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीहरुमा देखिएको लक्षण र रगत जाँच गरेर डेंगुको परीक्षण गर्ने गरेको अस्पतालका प्रमुख डा. अर्जुन बुढा मगरले बताए ।
‘सल्यान पनि डेंगुको जोखिममा रहेको छ, जुनसुकै बेला पनि महामारीको रुपमा फैलन सक्ने भएकाले सर्तकता आवश्यक छ’ उनले भने ‘यसका लागि जिल्लामा नै परिक्षण गर्ने ब्यवस्था गरेका छौँ ।’
पानी जमेका खाल्डाखुल्डीहरुमा सरसफाई गर्ने, घर वरपर सरसफाई गर्ने, सञ्चार माध्यममार्फत जनचेतना जगाउने र स्थानीयस्तरसम्ममा पुगेर सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. बुढाले बताए ।
विशेषगरी एडिज एजिप्टाई नामक लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने यो रोग लागेपछि एक्कासी ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी तथा टाउकोको पछिल्लो भाग दुख्ने, शरीरमा विमिरा आउने, रक्तश्राव हुने, जोर्नी, हड्डी तथा मांशपेशी दुख्नेजस्ता समस्या देखिने भएकाले तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गएर स्वास्थ्य परिक्षण गर्न उनले आग्रह गरे ।
प्रमुख डा.बुढा मगरले ज्वरो आउने, टाउको दुख्नेलगायतका विभिन्न लक्षण देखिएमा चिकित्सकको सल्लाहविना औषधी सेवन नगर्न आग्रह गरे । उनलले विशेषगरी लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्न आग्रह गरे । रातिभन्दा पनि दिउँसोको समयमा लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्नसकेमा यो रोगबाट बच्न सकिने उनको भनाइ छ ।
शान्तिनगरका मन्टेश्वरी विद्यालयहरूमा शैक्षिक सामग्री
संविधान आफै लोकप्रिय हुँदैन